Zenmate Premium Ukuqhuma - Pro Hack Ikhodi v3.1 Okugcwele Khulula Thwebula - Softkelo - Thola Softwares Unlimited, uqhekeko & Hacks
Ikhaya » uqhekeko Premium » Zenmate Premium Ukuqhuma – Pro Hack Ikhodi v3.1 Okugcwele Khulula Thwebula
Zenmate Premium Ukuqhuma – Pro Hack Ikhodi v3.1 Okugcwele Khulula Thwebula
ngu softkelo | September 14, 2017
Zenmate Premium Ukuqhuma inamandla kakhulu futhi isofthiwe abadumile emhlabeni wonke. Le software kuyasiza ufihle yakho zonke ikheli le-IP kanye nesazisi yakho yangasese. This software also helps to unblock that website which is blocked in your country.If you are not able to browse a site banned in your country you can use Zenmate Premium Ikhodi futhi ungakwazi ukuvula iyiphi isayithi.
I Ikhodi Zenmate premium inikeza eziphambili, luyimfihlo futhi ekhululekile mhubhe umhlinzeki inthanethi iziphequluli kanye amagajethi mobile.Ukuqhuma Zenmate iqondiswa ngosizo zen-unogada GmbH, inhlangano qala-up ngokusekelwe ngokuphelele e Berlin. I ibhizinisi wathola uqale-up konyaka 2014 award in Germany.You also can Zenmate Premium Sesifufula thwebula kusukela nezifufula.
Zenmate Premium is seseva esiza uvula kulawo mawebhusayithi okuyizinto block ezweni lakho.Zenmate Premium Khulula Usiza yini ukuze uvikele iwebhu yakho traffic.You can thwebula Zenmate Premium Khulula.
Download Zenmate Premium Ukuqhuma
Zenmate Premium Ukuqhuma
Zenmate ngokugcwele kuyinto Downloadable-plug-in ku-inthanethi iziphequluli okuyinto yaphenduka yakhelwe ukuvikela kanye avikele privateness izinkulungwane abasebenzisi ngisho njengoba upheqa wemboni net.Download omkhulu Zenmate Premium Ikhodi v3.1 is totally free.
Ukuphepha-plug-in futhi Ukugunda kumadivayisi eselula ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza lula enikeza futhi sidala ekhululekile futhi ephephile-VPN Umhubhe sisebenzisa olandelwayo we IPsec. Singamamayela okwamanje isingathwe kumaseva ahlukahlukene yonkana izizwe eziyinhloko kanye Switzerland, Germany, Hong Kong, i-United Kingdom, kanye USA.You Ungalanda Zenmate sesifufula premium.
Kukhona Ongakuthanda: Fihla Zonke Ip Ukuqhuma - Khulula Thwebula Full Ukuqalisa Key + serial Keygen
I okwalandela eziningi imisebenzi eyinhloko futhi ongasoze namakhono zen mate ekilasini phezulu:
I-plug-in ngokuphelele nomqondo ofanayo nge ezintathu eziyinhloko inthanethi iziphequluli ngokuqondile,
Mozilla Firefox, google chrome opera. Iphinde kusiza ezahlukene idivayisi Computing iziphequluli like dragon Comodo, chromium, nensimbi isikwele.
Iza kokubili Android iOS zokusebenza, nesebenzela ngu IPsec okuyinto kwakha lwenethiwekhi evamile ye-VPN.
Thatha igama ukuba lowo engizoshada naye zen kuyinto-plug-in proxy for iziphequluli net ukuthi ungakwazi futhi avikele futhi ubethele yonke imisebenzi ukuphequlula nomthamo. Akukhona njalo nje nempela umthwalo njengoba elula kwinsizakalo ye-VPN.
Setha i-kanye nokusebenza
Okulandelayo, kafushane, uchaza indlela yokulayisha-on imisebenzi:
Thwebula Zenmate Ikhodi futhi usethe zen mate izinga phezulu kusiphequluli sakho net.
Ikhasi lewebhu iqondiswe ohlelweni isofthiwe Iinhlangano internet site eyovulwa athutha ebonisa nokuthi umbiko privateness kanye nemishwana yesevisi. Faka ikheli lakho le evumelekile meyili ukwamukela imigomo felony.
Njengoba nje kuphelile, isithonjana iphrojekthi izobonisa ngaphakathi ekhoneni ofanele isiphequluli net, ekhombisa ukusebenza okuqhubekayo isengezo.
Nakuba ubuhlobo lisebenza, angenayo naphumayo traffic futhi ukuphequlula yokuchitha isizungu lubhalwe ngekhodi futhi kuqashwe nge iphasiwedi lokhu okuzenzakalelayo.
Zenmate Thwebula chooses its server place thinking about its geographical coordinates robotically. Umsebenzisi liyakhiwa unikezwa ukukhetha ngesandla alternate lokhu nganoma yisiphi isikhathi ukuze zindawo ukuboniswa.
Zenmate premium ngokugcwele kungenziwa wathola ngosizo ukuthenga ngcono for the imodeli mahhala Zenmate. Ukuthuthukisa angase athengwe nge izicelo ezintathu etholakalayo:
Izinga Top ngesikhathi 8.99 euro ngenyanga-to-ngenyanga
isigaba aphezulu ngezinye 7.99 euro ngenyanga 6 izinyanga (20% cut-intengo idili)
isigaba aphezulu ngezinye 6.99 euro ngenyanga-to-ngenyanga 365 izinsuku (30% cut-intengo idili)
Esikhathini esithile yokukhululwa umuntu ukulayisha sika ingxenye, iphrimiyamu kuthuthukisa manje kungabi kungathengwa. Ngenxa yalokho, umsebenzisi angenamkhawulo Imininingwane kubavakashi kuze kube sekupheleni kwalesi isigaba esiyingqayizivele.
Uhlelo lokusebenza le-VPN for zobuchwepheshe yeselula imahhala kakhulu ngendlela isayithi izivakashi izibalo ukhawule of 500MB. Ukuze uthuthukise ku-Inthanethi angenamkhawulo izivakashi amarekhodi, abasebenzisi Ungase futhi umusa ukukha kusukela 2 izicelo:
Limitless ngesikhathi 2 USD njalo ngenyanga
ezingenamkhawulo 20 USD njalo ngonyaka
Zenmate ngoba njengamanje has nokwesekwa kwamakhasimende ukuthi engafinyelelwa nge-imeyili. Iqembu losizo cishe njalo uphendule umbuzo noma inselele e 24 amahora noma ingasaphathwa.Zenmate Premium Ikhodi Ukuqhuma download now.
Khona lapha amaphuzu ambalwa ukuze uthande e Zen Mate Premium:
isethaphu Smooth futhi usethe izindlela
Ngenhla eyanelisayo uxhumano net ngokusebenzisa ukuvikelwa traffic
Icala ezincintisanayo futhi izikali ngomoya ophansi phakathi iphakethe idili izipesheli.
Lokhu okulandelayo izinto avele ngenxa ithuluzi:
It okwamanje elibamba elula iseva izindawo ezinhlanu.
Naphezu kweqiniso lokuthi baqale-up kubonakala ethembisa, kufanele ahlinzeke imisebenzi mkhulu namatalenta ukuze bamukele izifiso amakhasimende ahlukahlukene emhlabeni wonke.
Le sevisi kuphela ayenele imisebenzi isiqiniseko kusiphequluli internet ukuthi kude elisungulwe. Ama-imeyili nokucindezela ukubheka ukuxhumana kukhona nokho bangaphandle yokuvikela ekuhlanganiseni kwaso.
The necessity to Download Zenmate futhi ufake ama-plugin ezahlukene ngaphezu kwalokho uxhume ezinye ukuvuza IP akhiphe. Lezi ukuvuza ngokuvamile kusukela flash web RTS. Lokhu kungaba nesimo esibucayi kulabo kubasebenzisi abafuna ukuba transact ne izinga eliphakeme Ukuvikelwa.
Noma kunjalo Zenmate Premium Hack kungase kucatshangelwe njengoba base eyizingqabavu ngoba isithwali-VPN, kungcono amamayela okwamanje akuphelele. Isengezo presents umhlinzeki nokuvikeleka for iziphequluli inetha kanye VPN esinokwethenjelwa yeselula lokho ngokudlulele enhle. Kunezindlela ukukhathazeka ezimbalwa ufuna kubhekwane zisuka ezifana ukuvuza IP nokutholakala iseva izindawo. I ngcono ngaphandle kokungabaza ukukhetha ezinzima ucabangela kungcono amamayela kunjalo kude ukuma sako.
← Hide All Ip Crack – Free Download Full Activation Key + serial Keygen Adobe CC Patcher – Cloud Patch 2017 Ukuqhuma + Keygen →
4k Isiqophi Downloader omningi osemqoka Mahhala - Download Activation Keygen + Ukuqhuma
Corel VideoStudio Pro X8 Sesifufula - Ultimate Okugcwele Ukuqhuma + Keygeyn Khulula Thwebula
Amandla CD + G sikaphalafini 2 Vula Ikhodi - Khulula Thwebula yomkhiqizo
Poweriso 6.6 Ikhodi yokubhalisa - Free Download Serial Keygen + Ukhiye License